Abagqoke amasaka baxwayisa ngo-666 | IOL Isolezwe
Abagqoke amasaka baxwayisa ngo-666
Isolezwe / 16 November 2012, 2:08pm /
UMduduzi Jehova nezinye izinsizwa ezishumayelayo emigwaqeni.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Owesimame ongayikholwa indaba yalezinsizwa ezihambe zishumayeza abantu inkolelo yazo.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
SEKUQUBUKE indida ngabalisa abatheleke elokishini laseMlazi kwa-P izolo bedlubhe amasaka bethi bathunywe yinkosi yabo ebusa leli lizwe uYashuka, ukuthi bazoshumayeza batshele abantu ukuthi abaphenduke.
Laba balisa abayisikhombisa abadonse amehlo abantu kuleli lokishi njengoba bethe bengena baqaqelwa ngabantu befuna ukuzwa ukuthi bathini.
Bebehamba bememeza bethi abantu abaphume ezindlini babalekele ezintabeni bashiye konke njengoba lelizwe selifana nse neSodoma neGomora.
Uma bechaza bathi baliqhamukisa ezifundazweni ezahlukene kuleli njengoba bajoyina ibandla i-12 Tribe Israel of Light besakhula.
Leli bandla abathi lifundisa ngokuyeka izinto zomhlaba abantu baphendukele eqinisweni ngenxa yokuthi lo mhlaba sekuseduze ukuthi ugoqwe.
Lezi zinsizwa ezigqoke amasaka ezihamba ngezinyawo, uma umi eduze kwazo uhlangatshezwa yiphunga eligqashula ikhanda njengoba zingawalokothi amanzi, zigeza uma zihlangana nesiphethu ngoba zithi amanzi ompompi asuke esegcwele izinto eziningi usathane azithandayo.
UMandla “Alsheri” Yehova ongomunye obehamba nalezi zinsizwa uthi ibandla labo ngelakudala njengoba naye eqale ukukhoza kulo esemncane.
“Sixwayisa abantu ngezinto eziningi ubaba wethu uYashuka angazithandi. USathane usengene shi kubantu njengoba efuna bajoyine bathathe inamba yakhe i-666. Ubona kuvotwa, kubhaliswa yonke into le nisebenzisa amapasi usathane iyona ndlela anibamba ngayo ukuthi nibe ne-666,” kusho uMandla.
Unanelwe nguzakwabo uMduduzi “Siyare” Yehova naye othe bona badla izithelo kuphela abapheki nenyama abayidli njengoba ingukufa.
“UYashuka akabathandi abantu ababulalayo, imoto asiyigibeli ngoba ziginqika njalo usathane efuna ukuphuza igazi labantu. Izilwane ziyabulawa ngaphambi kokuthi zidliwe inyama asiyidli thina-ke ngeke sikwenze lokho ngoba kungumthetho kasathane ukuyidla. Izinto lezi enizenza emakhanda, ukudla enikuphekayo akuvumelekile njengoba uYashuka uma utshale ukudla, usukubona ukuthi kuvuthiwe, kumele ukudle kunjalo ungakupheki,” kusho uMduduzi.
Eqhuba uthe bona balala noma yikuphila izwi lenkosi yabo uma selifike lathi abalale, abanamakha-ya ngisho kuna imvula bayaqhubeka balale njengoba kubo ifana nesibusiso.
“Amakhaya sawashiya, sihamba yonke indawo le ngezinyawo ngoba kuwusuku lwethu lokuqala lolu la eThekwini siyadlula sesisuka koGoli, Eastern Cape naseLesotho sishumayela,” kusho yena.
Abantu bakuleli lokishi bebehlukene phakathi njengoba abanye bebefuna ukuzwa ukuthi laba bazothini abanye bebatshela ukuthi bayahhema.
Uthe zonke izinkolo ezikhona manje ngezamanga, zidukiswa ngusathane, bona njengoba behamba kangaka nje bazoqaphelisa abantu.
UNkk Cabangeni Nsele (53) wakulona leli lokishi obekubonakala ukuthi uthukile ebona laba uthe kwake kwenzeka ekhula kwaba khona ubaba ngakubo okhuluma kanje egqoka amasaka.
“Ngiyethuka kakhulu uma sekuphinda kuqhamuka laba bantu. Bake babakhona ngisakhula kodwa omunye wabo waphinde wabuyela esimweni waphila impilo ejwayelekile,” kusho uNkk Nsele.
Uthe izwe liyabhubha, ongaboni ngongaboni ngoba lokhu okwenzekayo kubhaliwe ebhayibhelini.